သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လူတိုင်းအတွက် '' သေစားသေစေသော '' ၏ရုပ်ရှင်ချစ်သောသူရှင်းပြဖို့ကြိုးစား - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလူတိုင်းအတွက် '' သေစားသေစေသော '' ၏ရုပ်ရှင်ချစ်သောသူရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် - BGR
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လူတိုင်းအတွက် '' သေစားသေစေသော '' ၏ရုပ်ရှင်ချစ်သောသူရှင်းပြဖို့ကြိုးစား - BGR
အံ့ဩခြင်းရုပ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်အောင်မြင်မှုအတွက်အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်အကြားရှိပါတယ်။ သင်တန်း၏, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ မတိုက်နိုင်ပါတယ် avatar အားလုံးအချိန်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအဘို့, ဒါပေမယ့်ဟေး, သင်ခဲယဉ်းထိုကဲ့သို့သော Avengers များနှင့်ဆက်စပ်မူရင်းပုံပြင်များအဖြစ်ဂုဏ်သတ္တိများပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကိန်းဂဏန်းများနောက်ထပ်စုဆောင်းမှုကိုရှာဖွေရန်ဖိအားပေးလိမ့်မည်ဟု
ပိုပြီး ဘာကွောငျ့ သူတို့ဒါကြောင့်လူကြိုက်များရှိပါသလဲ ကဖြန့်ဖြူးထုပ်ပိုးကိုသာအကြီးတွေကြယ်များဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ကိုမမွငျနိုငျသောအလုပျမှာလမ်းကြောင်းသစ်လည်းမရှိသလဲ? ဒါကသင်္ချာနှင့်စာရင်းအင်းနယ်ခြားမဲ့များအတွက် Excellence ၏ ARC စင်တာ (ACEMS) မှသုတေသီများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုခငျြတယျ။
တွင် တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ် သုတေသနအဖွဲ့သည်တစ်ဦးကြိုးပမ်းမှုအတွက်အံ့ဩခြင်းဠာ၏ရုပ်ရှင်မှစာရင်းအင်းမော်ဒယ်များလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ခုချင်းစီရုပ်ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှုမကြာခဏဂေဟစနစ်သုတေသနများတွင်အသုံးပြုပေမယ့်သူမစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ပါသလဲ?
"ကျနော်တို့ကလူသိများသည်အဖြစ်, အံ့ဩခြင်းရုပ်ရှင်၏မကြာသေးမီကစီးရီး, အံ့ဩခြင်းရုပ်ရှင်ရုံဠာ၏ကြီးမားသောပရိတ်သတ်များနေကြတယ်" ဟုသုတေသီမဿဲ Roughan ကပြောပါတယ် ။ ကရှင်းပြခဲ့သည် TechXplore ။ "ကျနော်တို့ကထုတ်လုပ်သူများ, ဒါရိုက်တာ, သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့မိသားစုလယ်သမား၏ကျန်ရုပ်ရှင်ရုံများ၏သမိုင်း၌ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ယုံကြည်ပါတယ်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်များကိုတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ "
က "ဇာတ်ကောင်များ၏အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကို" ဟုအဆိုပါသုတေသီများတစ်ဦးချင်းစီဇာတ်လမ်း၏အကျိုးဆက်များကိုသာဤအရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဇာတ်ကောင်များအရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့လေ့ကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်အမြတ်အစွန်း (အကောင့်ထဲသို့စုစုပေါင်းယူပြီးအပေါ်အခြေခံပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ အဆိုပါဇာတ်ကားများ၏ဘတ်ဂျက်) ကိုလည်းအလွန်နည်းပါးခြွင်းချက်အတူအထက်သို့ trended ပါပြီ။
မူရင်းဇာတ်လမ်းထုတ်ဝေရန်နှင့်အံ့ဩခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကိုကျော် Avengers ၏ကျယ်ပြန့်သွန်းအပေါ်မှီခိုဖို့မဟာဗျူဟာတစ်ဖောင်းပွဖန်တီးတစ်ခုစံပြမဟာဗျူဟာဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ စီးရီးတွင်ပါဝင်သောခံရဖို့အတှကျဒါဟာတဆယ်နှစ်ကျော်ယူ နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကောင်းကောင်းရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်။